Garba Paasifiik - Wikipedia
Garbi Paasifiik garba addunyaa keessaa isa guddaadha. Kaaban Arkitiik irraa ka'ee hanga Galaana Kibbaatti kan fulla'u yoo ta'u, karaa dhihaa Eshiyaa fi Awustireliyaadhaan, karaa bahaa immoo ardii Ameerikaa lamaanin marfamee argama.
Garbi kun lafa isquweer km miliyoona 165.2 kan uwwisu yoo ta'u, lafa bishaanin aguuggame keessaa kun parsentii 46% ta'a akkasumas gutumma addunyaa keenyyaa keessaa parsentii 30% qabata. Mudhiin lafaa garba kana bakka lamatti qoodudhaan Paasifiikii Kaabaa fi Paasifiikii Kibbaa uuma. Dhooqni Mariyaanaa kan Dhiha Paasifiikii Kaabaatti argamu iddoo addunyaa keenyarra garmalee gad dhooqqatu yoo ta'u kunis meetira 10,911 (35,797 ft) ta'a.
Garba kanaa maqaa Paasifiik jedhu kan baaseef abuurtuu biyya Poorchugaal Ferdinaand Maajelaani. Sababni inni maqaa kana baaseefis garbi kun tasgabba'aa fi bidiruu ofuuf mijataa waan tureefi maqaa Garba Nagaa(Paasifiik jechuun nagaa jechuu dha) jedhu kenneefi.
1 Biyyoota fi Bulchiinsota Biyyaa Naannoo Garba Kanaa
Biyyoota fi Bulchiinsota Biyyaa Naannoo Garba KanaaEdit
Awustireliyaa Jaappaan Naa'uruu Taayiwaan
Burunaayi Kamboodiyaa Niwuu Ziilaandi Taayilaand
Chiilii Kanaadaa Nikaraagu'aa Tiimor Bahaa
Chaayinaa Kiriibaatii Palaawuu Toongaa
Fiijii Kolombiyaa Panaamaa Tuuvaaluu
Filiippiinsi Kooriyaa Kaabaa Paappu'aa Niwuu Giinii Yunaayitid Isteetis
El Salvaador Kooriyaa Kibbaa Peeruu Vaanuwaatuu
Gu'aatimaalaa Kostaa Rikaa Raashiyaa Veetinaam
Honduraas Maleeshiyaa Samo'aa
Indoneeshiyaa Meeksikoo Singaappoor
Iqqu'aador Maakirooneezyiyaa Odoloota Solomoon
Ameerikaan Samo'aa Hoong Koong Niwuu Kaledooniyaa Waalisii fi Futuunaa
Odola Beeker Odola Hawulaandi Odola Noorfok Wake Island
Odola Kook Odola Jaarvis Niwee
Coral Sea Islands Johnston Island Northern Mariana Islands
Odola Faasikaa Kingman Reef Palmyra Atoll
Fireench Polineeshiyaa Makkaa'uu Odoloota Piitkeerni
Guwaam Midway Atoll Tookelaawu
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Garba_Paasifiik&oldid=25729" irraa kan fudhatame
Last edited on 21 Haggaya 2014, at 14:55
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 21 Haggaya 2014, sa'aa 14:55 irratti.